काठमाडौंमा कहाँ कतिलाई संक्रमण ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more काठमाडौंमा कहाँ कतिलाई संक्रमण ?
भदौ ३० गते, २०७७ - ०९:१२
आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सोमबार काठमाडौंमा ४ सय ४०, ललितपुरमा २९ र भक्तपुरमा ४३ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । हालसम्म काठमाडौंमा १० हजार २६, ललितपुरमा १ हजार १ सय ९० र भक्तपुरमा १ हजार ३१ जना संक्रमित पुगेका छन् । काठमाडौंको महाराजगन्ज क्षेत्रमा ३ सय ३८, नक्साल क्षेत्रमा १ सय ३१ संक्रमित पुगेका छन् ।
भदौ ३० गते, २०७७ - ०९:१२ मा प्रकाशित